Mutungamiri weAfrican Tourism Board Kutora Chikamu muExclusive Financial Afrik Awards
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Mutungamiri weAfrican Tourism Board Kutora Chikamu muExclusive Financial Afrik Awards
African Tourism Bhodhi • Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Mauritania Breaking News • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Mutungamiri weAfrica Tourism Board Alain St. Ange
Iyo Financial Afrik Awards musangano wepagore wega wega wezvemari yemuAfrica. Inounza pamwe chete maCEO uye vatariri vakuru kubva kwakasiyana siyana mari.
Chiitiko chemubairo uyu chiri kuitwa pasi pekutsigirwa kwepamusoro kweMukuru Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Mutungamiriri weRepublic.
Mune chimiro chaicho, vanenge mazana mana vakanyoresa vanozotevera mazuva maviri ekuitwa kwemusangano.
Pachave zvakare nevanhu vangangosvika mazana maviri vanotora chikamu kubva kumabhizinesi akasiyana siyana emari.
Bepanhau rezvemari remuAfrica reFinancial Afrik, rakabatana nebazi reMauritanian Ministry of Economy and Promotion of Productive Sectors, vatsinhira kuti vakoka mutungamiri weMauritania Alain St.Ange. African Tourism Bhodhi (ATB) uye aimbova Gurukota reSeychelles reKushanya, Civil Aviation, Ports and Marine, kutora chikamu muchikamu chechina cheFinancial Afrik Awards.
Mibairo iyi ichaitwa paAl Salam Resort Hotel muNouakchott, Mauritania, Zvita 16 na17, 2021, pasi pedingindira rekuti "Africa muna 2050."
Chiitiko ichi, chiri pasi perutsigiro rwepamusoro rweMukuru Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Mutungamiriri weRepublic, achaunza pamwechete vanhu mazana maviri kubva munyika yehupfumi, mari, uye bhizinesi uye, vangangoita, vamwe mazana mana vakanyoresa vanozotevera musangano kuburikidza ne yakatsaurirwa chikuva.
PaNouakchott, uchave mubvunzo wekutsanangura mafambiro epasi rose eAfrica muna 2050 kuitira kupa nyika nemasangano maturusi ekuongorora ekutarisira.
The Zvemari Afrik Mibairo chiitiko chakasarudzika chinounza pamwe chete gore rega rega, kubvira 2018, nyanzvi, vakuru vakuru vemabhanga, makambani einishuwarenzi, masangano ehurumende, fintechs, mastock exchanges, uye mari yekudyara, nezvimwewo, pamwe nevakuru vakuru nevanoita sarudzo kubva kuAfrica uye. kumwewo.
MaFinancial Afrik Awards achapera manheru emubairo achipa mubairo kune vanhu vakazvisiyanisa mundima dzavo.
Nezve iyo African Tourism Board
Yakagadzirwa mu2018, the African Tourism Bhodhi (ATB) isangano rinozivikanwa pasi rose nekuita sechikonzero chekusimudzira kwekufamba nekushanya kuenda, kubva, uye mukati medunhu reAfrica. Iyo ATB chikamu che International Mubatanidzwa weVashanyi Partner (ICTP). Sangano rinopa kurudziro yakabatana, tsvakiridzo ine hungwaru, uye zviitiko zvitsva kunhengo dzayo. Mukubatana nenhengo dzakazvimiririra uye dzeveruzhinji, iyo African Tourism Board inosimudzira kukura kwakasimba, kukosha, uye mhando yekufamba uye kushanya muAfrica. Sangano rinopa hutungamiriri uye kuraira pamunhu uye pamwe chete hwaro kumasangano ayo ari nhengo. Iyo ATB iri kuwedzera pamikana yekushambadzira, hukama neveruzhinji, mari, kushambadzira, kusimudzira, uye kumisikidza niche misika.